sidee looga xusay 27 ka may magaalada burco | Samatar's Weblog
sidee looga xusay 27 ka may magaalada burco
May 28, 2008 samatar
Burco(samatar .) Fagaaraha Khayriyada magaalada Burco ayaa maanta lagu qabtay munaasibad lagu xusayo sanadguuradii labaatanaad ee ka soo wareegtay gudagalkii ciidamada SNM,ee Burco,oo ku beegan 27Mey.
Munaasibadan oo ay ka soo qaybgaleen dadweyne aad u badan oo sitay boodhadh iyo calamo ay ku qoran yihiin halku dhigyo tilmaamaya xuska 27mey.
Duqa magaalada Burco,Maxamuud Axmed Xasan(Dhegalaab)oo munaasibadaa furay ayaa sheegaya in saaka ay tahay subaxdii u horeysay ee ay burburtay dawladii siyaad bare,waa subaxdii ay bilaabantay xornimadan aynu haysano,waa subixii uu burburay heshiiskii Siyaad Bare iyo Mingiste.
Waxa uu intaas maayirku raaciyay hadaanay jirin 27Mey inaanay jirteen 18Mey “Muhiimada munaasibadani waxa ay tahay sidii jiilka dhalinyaradu u ogaan lahaayeen tariikhda la soo maray Xornimada dalkooda”Maayirku waxa uu ku soo koobay hadalkiisii in xuskani noqondoono mid sanadwalba la qabto.
Mujaahid Faysal Xabaal mariwaa,oo ka mid ahaa mujaahidiintii SNM ee 27Mey soo gashay Burco ayaa faahfaahiyay siday ku soo galeen ciidanka SNM,tirada ay ahaayeen gaadiidka ay wateen iyo goobaha ay ka soo dhaqaaqeen waxaanu yidhi “ Waxaanu ka soo dhaqaaqnay Magaalada Samatar Axmed galabnimadii 26Mey,waxaanu ahay sadex guuto oo lugta iyo guuto tikniko ah,isugayntooduna tahay 812mujaahid oo 14 haween ahaayeen,waxaanu wadanay 12gaadhi oo tikniko ah iyo gaadiid badan oo shicib ah.
Waxa uu raaciyay intaa in guutooyinkaas ay kala wateen Tawakal Muj.Axmed Macalin Haaruun,Alla-aamin, Muj.Xandule,Sadexaad Muj.Ibraahin ha liqin,Guutada tiknada,Muj.C/llaahi Dakhare,(Alle-Haw naxariisto Dhamaantood),Taliyaha guud ee ciidanku waxa uu ahaa Muj.Axmed Mire.Abaanduuluhu Aadan Saleebaan,Hawlgalintu
Xuseen Kharash yare.
Muj.Faysal waxa uu sheegay in waajibaadka la soo siiyay ay ahayd in Rasaastii iyo saadkii ay ku dagaalami lahaayeen ay kaga horeeyaan Burco,oo u hayan hayaan ciidanka faqashta ee jooga halkaas,sidaas darteed ninwaloba ku xisaabtan sidaad uga furan lahayd,gaadiidkii aanu waanu wadanay markii ay soo galeen Burco way goosteen shidaal la,aan awgeed, “Haseyeeshee Niyada iyo Mooralka ciidanka ayaa ahaa mid aad u sareysa oo kalsooni badan qaba”.
Isagoo Muj.Faysal sii wata hadalkiisii waxa uu yidhi “Subaxnimadii hore ayaanu ku waabariisanay Xeryihii ciidamada faqashta,kuwaasoo anu ka dhignay wax dhintay ,wax la qabtay iyo wax yaacay,hadaba walaalayaal waa inaad ogaataan in xornimadan aynu maanta ku fadhinaa aanay ku iman dhayal ee ku timi dhiigii walaaladiin,waxaanu ku soo xidhay hadalkiisii in Mujaahidiintii ku dhimatay Halgalkii loo Akhriyo Faataxada.
Abwaan Maxamed Ibraahin Warsame(Hadraawi),oo isaguna ka mid ahaa Mujaahidiintii SNM, ee Burco soo gashay oo ka hadlay Xuskaa 27Mey,ayaa sheegay in Maanta ay tahay Maalintii Maalmaha,Waxa uu inta raaciyay in ilaa xiligii gumaysigu dalkan yimi ay ummadu dagaal uun ku jirtay,marba heer marayay,haseyeeshee ugu dambayntii ay gashay dagaalkii yimi,oo la huray naf iyo maalba si ay u difaacdaan Karaamadooda iyo Milgahooda.
Waxa uu Abwaan Hadraawi intaa ku daray in markii Itobiya maqashay SNM ayaa gudihii dalka ka dagaalamaya ,waxay tidhi waayo cida qabsatay ciidankii siyaad bare,sabatoo ah waxay SNM u haysatay inta dirayska gashan oo kaliya,Hadaba maanta qoomamo iyo xisaabtan ma jirto,waa maalin farxadeed,inkastoo dadku fara madhan yahay,hadana waxa la dugsinaya qaranimada, “Waxaadse ogaataan hadaad doonaysaan guul ka weyn tan idinkay idinku xidhan tahay’Ayuu yidhi Hadraawi.
Waxa uu kaloo Hadraawi ku baraarujiyay dadkii in la ogaado oo la xasuusto Ooryihii iyo Ubadkii Mujaahidiintu ka dhinteen “Waa in la xasuusto oola xuso oo aan lagala xeer dhigin dadka”.
Abwaanku waxa uu ku soo xidhay Hadalkiisii Maansadii “DAALALAY”oo goobtaa ka tiriyay,taasoo markaliya bedeshay jawigii madasha oo ka dhigtay in eego oo la dhegaysto Maansadaa,waxa mar kaliya joogsaday sanqadhii iyo dhaqdhaqaaqii fagaaraha,marka laga reebo sawaxanka sacabka oo marar isqabsanayay.
Muj.Dr.C/qaadir Aw-Muuse Muruqliqe,oo ahaa dhaktarkii ugu horeeyay ee SNM ku biira ayaa munaasibadaa ka sheegay in guushii SNM,ay iska lahaayeen shacbigu,waxaanan maalintaa hubaa in Maansadii Hadraawi ee Daalalay ay rumowday.
Waxa uu intaa ku daray in casharka laga bartay 27Mey uu yahay in cidkasta oo isweynaysiisa ma ka hortimaada waxa ummadu doonayso ay bulshadu ridi karto.
Hadaan maalintaa go,aankaa adag ee lagu shahiiday aan la qaadan maanta halkan maynu fadhineen,jabhadii SSDF,waxay baaba,aday Maalintaas,Waayo may haysan Ragii SNM,oo kale,Sidaas darteed waxa loo baahan yahay in ummadu ilashato Taariikhdeeda,oo aanay ka lumin.
Muj.Ibraahin Dhega weyne.
Waxay ahayd maalin dawladii aynu martida u ahayn ee itoobiya ay heshiiyeen Siyaad Bare,waxay 27Mey ahayd maalintii u horeysay ciidankii SNM ay si geesino leh u soo galeen Burco,Anigoo waxaan ahaa ciidankii Dhinaca Hargaysa soo galay waxaanu ka dambaynay afar cisho.Ilaahay ayaa guusha ina siiyay,haseyeeshee waxay ahayd inaynu dhamaystirano.
Waxa uu Muj.Ubraahin ku soo xidhay in loo baahan yahay in bulshadu isku xidhnaado,oo laga wada shaqeeyo danta guud iyo horumarka.
Waxa ilaahay inoo fasaxy in hadii layna dulmo aynu ka dagaalano,waa inaynu ilaahay ugu mahadnaqnaa guushii uu ina siiyay.Waxa uu intaa ku daray in ay fududahay in wax la dumiyo,balse ay adag tahay in wax la dhiso,waxa loo baahan yahay oo bulshada laga doonayaa inaynu gacmaha isqabsano oo inagoo wadajira ka shaqeyno horumarinta dalkeena “Ogaada dawladu waa idinka(Bulshada)”.
Muj.Cali Hayaan.ayaa isaguna sheegay inay maalintaa qaateen go,aan adag,oo ah Geeri iyo guul,waxaanu ku xisaabtamaynay Saadka cadowgu haysto,waxaase gacanta ugu weyn ka helnay dadweynaha,Waayo Xooga aanu tirsanaynay ayay ahaayeen,Sidaas darteed ilaahay waa nagu guuleeyay,balse ha la ogaado Taariikhda,oo la barto maalmaha qiimaha weyn inagu leh.
Muj.Xaliimo Axmed Faarax,oo ka mid ahayd haweenkuu mujaahidiinta ahayd ee la socday Ciidankii soo galay Burco 27mey,oo munaasibadaa ka hadshay ayaa tilmaantay inay 14haween ah kula socdeen ciidanka,islamrkaana ay ka dhinteen laba dumar ahi balse ay intoodii kale nool yihiin “Waxaanu doonaynay inaanu wadankayaga ka xoreyno cadowgii waxaanu go,aansanay inaanu shahiidno”.
Waxay intaa ku dartay inay aad ugu farxsan tahay inay dlkoodii xor ah ay ku noolaadaan,inkastoo aanay hada wax shaqo ah haynin.
Gudoomiyaha gobolka togdheer ayaa ugu dambayntii soo gunaanaday Munaasibadaa isagoo xusay inay tahay maalin weyn oo qiimo ku leh dalka,islamrkaana waxa uu ugu baaqay dadweynaha gobolka inay noqdaan kuwo isku xidhan ka wada shaqeeya horumarka gobolkooda.
Waxa munaasibadan ka soo qaybgalay martisharaf badan oo uu ka mid yahay Muj.C/raxamaan Aw cali Faarax iyo Marti sharaf kale oo badan,Sidoo kale waxa Xarunta Jaamacada Burco Caawa lagu qabtay Xaflad iadana lagu xusayo 27Mey,oo ka soo qaybgaleen Dadweyne aad u badan.
Munaasibadan ayaa ahayd tii ugu waynayd ee lagu xuso 27Mey ee ka dhacda Burco,waxaana iska kaashaday qabanqaabadeedii Xafiiska Sooyaal Iyo Ururka Togga,waxaana ka qybqaatay Maamulka D/hoose,Koox Fanaaniin ah ayaa fagaaraha ku soo bandhigay Riwaayad iyo maasooyin ka tarjumaya jidkii loo soo maray halgankii dalka lagu xoreeyay.Gaadiid ay ku rakiban yihiin codbaahiyayaal ayaa ku wareegayay jidadka magaalada kuwaasoo ay ka baxayeen Heesihii caanka ku ahaa halgankii SNM,oo uu qaada jiray Alle Hawnaxariistee Fanaankii Weynaa ee Maxamed Mooge Liiban,
← Guddoomiyaha Komishanka Doorashooyinka oo ugu Baaqay Hoggaamiyayaasha Xisbiyada inay Heshiis Degdeg ah Gaadhaan
Taariikh nololeedkii Farhan Mohamoud hidig (background) →